तपाईंको वास्तविक आवश्यकता के हो ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ मंसिर २२, आईतवार ११:१२ गते
‘आवश्यकता’ एउटा यस्तो शब्द हो जसका बारेमा सबै परिचित छन् । आवश्यकताविना– जरुरतविना जीवनको एक दिन पनि व्यतीत हुन सक्दैन । त्यसैले त भनिन्छ : ‘आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो ।’ मानिसलाई आवश्यकता महसुस भएपछि उसले विभिन्न चीजबीजको खोजी ग¥यो जसबाट उसको आवश्यकता पूरा हुन सकोस् ।
आवश्यकताका बारेमा के बुझ्नुहोस् भने आवश्यकता के हो र कसलाई कसको आवश्यकता छ ? कसलाई कसको आवश्यकता छ भन्ने कुरा आफ्नो जीवनमा बुझ्नु अति नै आवश्यक छ । पानीलाई माछाको आवश्यकता पर्दैन तर माछालाई पानीको आवश्यकता हुन्छ । यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ किनकि माछा मार्नेले पानीमा जाल हालेर जाललाई बाहिर निकाल्दा भलै पानी माछाबाट अलग भएको होस् तर त्यतिखेर पनि माछालाई पानीको आवश्यकताले यति सताउँछ, त्यसको अभावमा उसले आफ्नो ज्यान नै गुमाउनुपर्छ । पानीलाई माछासँग कुनै प्रेम हुँदैन । त्यो त निरन्तर बगिरहन्छ ।
त्यसैगरी तपाईं पनि के कुरा बुझ्नुहोस् भने तपाईंलाई कसको आवश्यकता छ ? के कहिल्यै तपाईंले बसेर तपाईंको वास्तविक आवश्यकता के हो भनेर सोच्नुभयो ? आवश्यकतालाई पूरा गर्ने व्यवस्थामा त लाग्नुभयो तर कहिल्यै यस्तो सोच्नुभयो– ‘यो मेरो जीवन हो । म जीवित छु । मभित्र श्वास आउँछ अनि जान्छ । एउटा सीमित समय हुन्छ, त्यतिखेरसम्म म जीवित रहन्छु । त्यसपछि म यहाँ रहँदिन ।’ हामीलाई जाने समय कहिले आउँछ भनेर थाहा त छैन तर पक्कै आउनेछ भन्ने कुरा अवश्य थाहा छ । हामी बाँचुन्जेलसम्म हाम्रो वास्तविक आवश्यकता के हो ? हाम्रो हृदयले के मागिरहेको छ ? हाम्रो हृदयले कुन कुरालाई आफ्नो आवश्यकता मान्दछ ? हामी यहाँ आएका छौँ भने जीवनमा कमसेकम आफ्नो वास्तविक आवश्यकतालाई पूरा गरेर त जाऊँ !
सबै आवश्यकताहरू त कहिल्यै पनि पूरा हुँदैनन् । मानिसले चाहे जतिसुकै परिश्रम गरोस्, उसले आफ्ना सबै आवश्यकतालाई पूरा गर्नै सक्दैन । कमसेकम एउटा प्रमुख आवश्यकता त पक्कै होला जसलाई उसले पूरा गर्न सक्छ ।
मानिसका केही यस्ता आवश्यकता हुन्छन् जसलाई कुनै कुराको सीमाले बाँध्न सक्दैन । यदि मानिसले त्यसलाई रोक्न चाह्यो भने पनि रोक्न सक्दैन । मानिस पढेलेखेको छ या अनपढ छ भन्ने कुराहरूसँग त्यसले सम्बन्ध राख्दैन ।
शान्तिको आवश्यकता पनि त्यस्तै आवश्यकता हो । भित्रको जुन पुकार छ त्यसले कहिल्यै कसैलाई वास्ता गर्दैन । चाहे जोसुकै होस्, तर ऊभित्रको आवाज आइरहन्छ । यद्यपि मानिस त्यसलाई नसुनेभैmँ गर्ने कोसिस गरिरहन्छ ।
प्रेम रावत भन्नुहुन्छ– जुन चीजको तपाईंलाई आवश्यकता छ त्यो तपाईंभित्रै छ । म चाहन्छु– तपाईं त्यो आवश्यकतालाई आपैmँ बुझ्नुहोस् र त्यसको अनुभव गर्नुहोस् ।
यो संसारमा रहेर आपैmँलाई शान्तिको अनुभव नभएसम्म, हामीलाई के प्राप्त भएको छ भनेर हामी बुझ्नै सक्दैनौँ । त्यसकारण सृष्टिकर्ताले मानिसभित्र शान्तिको तिर्खा लगाइदिएका छन् । यदि दुईजना झगडा गरिरहेका छन् भने झगडा गर्न बन्द गरेमा शान्ति हुनेछ भनेर मानिसहरू ठान्दछन् । यो शान्ति होइन । शान्ति त त्यस्तो वास्तविक आवश्यकता हो जसलाई बुझेपछि तपाईँको जीवनमा आनन्द नै आनन्द हुनेछ ।
के तपाईंले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो शान्तिको अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन ?
यदि तपाईंले त्यस्तो शान्तिको अनुभव गर्नुभएको छैन भने अनुभव गर्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुहोस् ।
प्रेम रावत मानवता र शान्तिका बारेमा चर्चा गर्नुहुने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । शान्ति प्राप्त गर्ने प्रेरणा दिनुभएकाले विश्वका थुपै्र सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाहरुद्वारा उहाँलाई शान्तिदूतको उपाधि प्रदान गरिएको छ । हालै मलेसियामा उहाँलाई ‘एसिया प्यासिफिक ब्रान्ड फाउन्डेसन’ ले ‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’द्वारा सम्मानित गरेको छ । उहाँ र उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नका लागि www.premrawat.com र www.timelesstoday.tv वेबसाइटहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।